Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Gabriel Veron Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ihe omuma anyi bu Gabriel Veron na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, enyi nwanyi / nwunye ya ibu, ndu nke onwe ya, ndu ya na uru ya.
Na nkenke, anyị na-ewetara akụkọ ndụ zuru oke nke ndị egwuregwu bọọlụ Brazil. Onye bụbu nwa ehi nke na-ebu aha "Bolt". Bodị Lifebogger nke Gabriel Veron's Life Story malitere site n'oge ọ bụ nwata. Ọ gaziri mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na egwuregwu bọọlụ.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị na-atọ gị ụtọ na ọdịdị na-adọrọ mmasị nke Gabriel Veron's Biography, lee ndụ nwata ya na mbili ịrị elu. Ga-ekwenye na m na ụlọ ọrụ mgbasa ozi dị n'okpuru ebe a na-achịkọta Bio ya.
Gabriel Veron Biography. Hụ ndụ nwata ya na Ọganiihu Akụkọ.
Onye bụ Gabriel Veron?… Onye ọ bụla maara na ọ bụ ọdịnihu nke football Brazil. Playerdị onye ọkpụkpọ nke na-eji nnukwu ike ndọda ya na osooso egwu ndị na-agbachitere ya, na-atụghị ndị na-emegide ya egwu ma merie nnukwu ihe mgbaru ọsọ.
N'enye aka na otuto ndị a, anyị ghọtara na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara akụkọ ndụ Gabriel Veron. Anyị akwadebela ihe ncheta ya maka gị na n'ihi ịhụnanya anyị nwere maka egwuregwu mara mma. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Gabriel Veron Childhood Akụkọ:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha zuru oke Gabriel Veron Fonseca de Souza. A mụrụ Gabriel Veron na ụbọchị 3 nke Septemba 2002 nne ya, Graciele Fonseca Silva na nna, Carlos Eduardo de Souza na Assu, Northeast Brazil.
Igwe kpakpando nke mba Brazil bịara n'ụwa dịka nwa nwoke, n'ime ụmụ atọ (ya na ụmụnne nwanyị abụọ) amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya.
A mụrụ Gabriel Veron onye Katọlik, dị ka ọtụtụ ụmụaka sitere na ezinụlọ Brazil. Nke a bụ nwatakịrị nọ na-eme baptism (Baptism), n'aka nne ya nke na-ahụ n'anya.
Gabriel Veron n'akụkụ nne ya ka ọ na-anata Baptizim site na Chọọchị Katọlik ndị mụrụ ya na-aga.
Aha aha ya - Gabriel Veron:
You na-eche ihe mere Igwe kpakpando Brazil bu aha nke akuko Argentina? Ọ bụrụ ee, ọ ga-abụrịrị na ị jụrụ ajụjụ a;… Gabriel Veron metụtara Sebastian Veron? Azịza ngwa ngwa nye nke ahụ bụ; MBA!
Gabriel Veron metụtara Juan Sebastián Verón?
You maara?… Aha Gabriel Veron sitere na nrọ nke onye agbata obi ya. Onye agbata obi ya bụ enyi ezinụlọ ya na nnukwu onye Juan Sebastián Verón. Nwoke a na-ekwu okwu ya mgbe niile chọrọ nwa nwoke. Ọ nwere ụmụ nwanyị atọ, enwekwaghị olileanya ịmụ nwa nwoke n'ihi afọ nwunye ya (na-erute nsọ).
N'oge nne Gabriel Veron (Graciele Fonseca Silva) dị ime nke ukwuu, onye agbata obi ahụ a jụrụ ajụjụ gara ozugbo. N'emeghị ihere, ọ rịọrọ ka a gụọ nwa Graciele aha ya bụ football Idol- Veron. N'ụzọ dị mma, a nabatara arịrịọ ahụ na-adịghị ahụkebe na nke dị iche. Nke a bụ otú Gabriel si nwee aha Veron ya.
Onye Brazil weghaara oge niile nwata ya n'obodo a na-akpọ Assu, nke dị na steeti Rio Grande do Norte, na Brazil. N'oge nwata nwoke, Veron na-eto eto nwere àgwà ndị e bu ụzọ mụọ. Mgbe ọ dị afọ isii, ọ dị obere na nkịtị, ọbụna na-eme dị ka obere-okenye.
Maka ndị na-eto eto na-eto eto, ncheta oge nwata ga-eweghachi ya oge ọ thoseụ ahụ ya na nne ya na ụmụnne nwanyị abụọ ndị tọrọ. N'okpuru ebe a, mmadụ atọ a ewetala ọ joyụ na ndụ ya.
Nne na ụmụnne nwanyị nwanyị Gabriel Veron bụ ndị kacha dịrị nso na obi ya.
Gabriel Veron Ezinụlọ:
Nsonaazụ sitere na nyocha anyị nwere na onye bọọlụ bọọlụ Brazil etolitere n'ime ezinụlọ na-akwagharị na ndị dara ogbenye. Nna Gabriel Veron, Carlos Eduardo de Souza bụ Onye Ọchịchị na Onye Nlekọta- nwoke nke siri ọnwụ na nwa ya nwoke ga-agbaso nzọụkwụ ya. N'aka nke ọzọ, mama ya, Graciele Fonseca, bụ naanị onye na-elekọta ụlọ ma ọ bụ nwunye oge niile.
N’oge ahụ, ezinụlọ Gabriel Veron bi n’obere ụlọ dị n’okporo ụzọ kpọrọ nkụ nke na-enweghị pavment. Ọ jụrụ ọchịchọ nna ya ime ka ọ na-elekọta ehi, ịnyịnya ma rụọ ọrụ n'ubi. Nke ahụ emeghị nke ọma nna na nwa. N'ezie, Gabriel Veron nwere nanị mmasị na bọlbụ na nke kpatara nsogbu dị n'etiti ya na papa ya.
Gabriel Veron Ezinụlọ. Nke a bụ ebe o biri dị ka nwatakịrị.
Mama Gabriel Veron, nwanyị nwere atụmanya, amalarị na nwa ya nwoke agaghị enwe ihe ịga nke ọma na ọrụ nke onye na-egwu ehi na onye na-elekọta ịnyịnya.
Kama nke ahụ, ọ tụbara nkwado ya nye ya na-atụ anya ịbụ ọkachamara n'ịgba ọsọ. Gwa nwa ya nwoke ka ọ kwụsị ọrụ ochie nke ezinụlọ adịghị adabara di ya, Carlos Eduardo.
Gabriel Veron Ndị nne na nna ekewa:
O di nwute na oge ahu, nmekorita nke di na nwunye n'etiti Gabriel Veron na Papa m nwere obi ojoo. N'ihi esemokwu dị iche, Graciele na Carlos kpebiri ịga ụzọ ha dị iche iche. Ọ bụ papa Gabriel Veron hapụrụ ya, mama ya na ụmụnne ya nwanyị.
Mgbe nne na nna ya kewara, Veron (ka bụ nwatakịrị) gara biri na nne na nna ya ochie - Mr na Mrs José Nazareno da Silva. Acceptedmụnne ya ndị nwanyị na nne ya (Graciele Fonseca) nabatara ibi n'ụlọ nwanne nna ya (nwanne nwanne) onye aha ya bụ Jackson Fonseca.
N'ikpeazụ, ndụ na ihe ịma aka malitere maka nwatakịrị ahụ mgbe nne na nna ya kewara. Gabriel Veron kwere nkwa na ya ga-agbasi mbọ ike ime ya, ka ọ ghara imechu nne ya ihu. Nọ na ndị ikwu ya nyere aka nyere ha aka mgbe niile na-agba ya ume ka ọ ghara ile anya.
Assú dị n’ọzara Brazil. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, Gabriel Veron na-esi na Caatinga, bụ oke ala ejiri kọwaa mpaghara oke ọhịa dị na South America.
Ndị si n'akụkụ nke a nke Brazil nwere agba dị otu ahụ. Ha na-ata ahụhụ mgbe niile site na oke okpomọkụ nke dị elu 40 Celsius. Mpaghara ndị ahụ na-akwado ụmụ ehi na-azụ ehi na Hostler na-elekọta ịnyịnya, dị ka Carlos, Gabriel Veron's Dad.
Mpaghara mpaghara ala Brazil nke Gabriel Veron nwere mgbọrọgwụ ezinụlọ ya bụ ebe kasị daa ogbenye iji biri na mba ahụ dum. Mpaghara ahụ bụ ihe kachasị emetụta n'etiti mpaghara niile na mba ahụ.
N'ezie, o siri ike ịhụ ndị egwuregwu bọọlụ Brazil na-aga nke ọma na mpaghara a. Ha na-akpọkarị mmadụ ole na ole meere onwe ha aha na Europe Ezi ndị agha Caatinga. Otu ihe atụ bụ Dani Alves.
Gabriel Veron Mmụta:
Dika nwatakiri nwoke si na mpaghara oke ugwu nke Rio Grande do Norte, ihe nile o choro bu iga ulo akwukwo nke football nke kwekọrọ na ya. Veron nwere mmasị na ndị na-ele ya ka ọ na-egwu nke ọma na Futsal.
N'ihi egwuregwu ya, ụlọ akwụkwọ IPI (Instituto Padre Ibiapina) dị na Assú nyere ya ohere agụmakwụkwọ zuru oke. Mgbe ọ na-egwu futsal, Veron meriri iko nke mbụ ya na nrite. Ndị otu ya batara, yabụ ya bụ kpakpando nke asọmpi ahụ.
Nwere ike ịhụ Gabriel Veron ebe a? Nke a bụ ihe ịrịba ama nke ịdị mma ya dị mma - mmeri na inweta nrite.
Gabriel Veron kachasị ọchịchọ ya na ndụ bụ ịzụlite nkà ya, onye ọ na-atụ anya ga-ewetara ya ohere ịkpọ ya maka ịgba bọl. N'oge ahụ na ọbụna ugbu a, nnukwu klọb dị na mpụga obodo ya na-abịakarị ịkpọ ụmụ nwoke ndị ọgbọ ya.
Inweta ohere ọ bụla ịhapụ obodo ọzara ya ma gbaa bọl na mpaghara bara ọgaranya nke Brazil na-egosi nnukwu nrọ nwata. Ọ bụghị naanị ya, kamakwa ụmụ nwoke ndị ọzọ. Ha nwere olile anya di elu iso Dani Alves nzọụkwụ.
Gabriel Veron Football Akụkọ:
Mgbe afọ ụfọdụ nke ịnọ na-egbu mgbu gasịrị, ohere mechara pụta. Santa Cruz de Natal (ụlọ ịgba bọọlụ dị n'obodo ahụ) zipụrụ akwụkwọ ịkpọ oku maka ụmụ okoro niile (ndị chọrọ ịgba bọọlụ na Assu) ka ha bịa hụ sieve (ikpe bọọlụ). Ọnọdụ maka ule ahụ bụ na Ipanguaçu, obodo dịdebere Assú.
Gil Sergipano - onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ (nke bụzi talent scout) haziri ikpe bọọlụ. Ọ bụ ọkachamara na ịkpọ ụmụ nwoke si Assu igwu egwu na Santa Cruz, klọb n'obodo Natal, Brazil.
Know maara nke ọma?… Gabriel nke Veron nke anyị so na ụmụ okoro atọ akpọrọ ka ha sonye na ikpe ahụ. Enwere ụmụ nwoke 300 na 16 dị afọ kachasị elu, Veron, bụ naanị 17 - n'etiti ndị ọdụdụ. Na ọ ofụ nke onye ọ bụla - gụnyere ezinụlọ Gabriel Veron, ọ bịara kacha mma (kwụpụtara nke kachasị) n'etiti ụmụaka 13 niile.
Mgbe nyocha ahụ gwụchara, João Nobre (onye isi oche Santa Cruz de Natal) gara n'ụlọ nne Gabriel Veron iji chọọ ọdịnaya ya na ịhapụ nwa ya nwoke ịga Natal iji zụọ na Santa Cruz. Graciele - jiri obi uto - were obi uto nakwere.
Gabriel Veron Biography - tozọ a ma ama Akụkọ:
Mgbe ị na-egwuri egwu maka Santa Cruz de Natal, talent nke nwata ahụ mere ka ọ maa mma. Ọchịchọ ilekwasị anya na football ya mere ka Gabriel Veron mee mkpebi siri ike. Na nke mbụ, ọ hapụrụ ezinụlọ ya maka ụlọ ọhụrụ na Santa Cruz base.
Mgbe obere ọnwa isii nke ọzụzụ nkuzi kpụ ọkụ n'ọnụ, Gabriel Veron fọrọ nke nta ka ọ kwụsị ịhapụ naanị ya. N'ihi na ọ bụ atụmanya kachasị mma nke ụlọ ọrụ ahụ, João Nobre, onyeisi oche Santa Cruz aghaghị ime ihe. Ọ chọtara ụzọ iji mee ka nwatakịrị ahụ kwenye na ebe obibi ya.
N'ihi ịhụnanya, nwoke a nwere maka Gabriel, o zipụrụ ndị ọrụ ya ka ha na Asuu kpọta nwanne nwanne Gabriel Veron Rafael - onye sonyeere nwanne ya nwoke na Natal. N'ihi mkpebi ahụ, Gabriel Veron enweghịzi agụụ ụlọ.
Ọ gbanwere ndụ ọhụrụ ahụ ma nọgide na-aga n'ihu na klọb. Gabriel Veron nwere nwoke a (João Nobre, Quebra Osso) ikele. Ọ bụ onye inyeaka ya, onye isi oche Santa Cruz. Joao bụ nwoke mesoro Veron dị ka nwa ya nwoke.
João Nobre hụrụ nnukwu ikike na Gabriel Veron. N'ihi nke a, o lekọtara ya nke ọma.
Obi siri ike mgbe ya na Santa Cruz de Natal na-egwuri egwu nọgidere bụrụ nnukwu isiokwu nke mmasị ndị Brazil. N'ezie, onye ọ bụla maara na otu nnukwu ndị ọrụ dabara Gabriel Veron. N'iburu n'uche na ọ bụ Santa Cruz kachasị egwu, klọb ahụ lere nhọrọ nke ire ya iji nweta uru.
Gabriel Veron Bio - Akụkọ Successga nke Ọma:
Ihe dị ka ọnwa Ọgọstụ afọ 2016, ụlọ ọrụ mgbasa ozi Brazil kwuru na Palmeiras rere onye na-eti ihe Gabriel Jesus ka Manchester City - dị ka a iku ibe na Sergio Aguero.
Mgbe ọ nụsịrị nke ahụ, onyeisi oche Santa Cruz (João Nobre) malitere ime njikọ Veron. Ya na njikwa nke mmepe Palmeiras - nke João Paulo bụ onye isi ya kwuru. N'ịchọ ime ka ọgbakọ ahụ zụta Veron, João Nobre kwuru;
Amụtara m na ị rere Gabriel Jesus, mana enwere m Gabriel ọzọ ebe a na Santa Cruz iji dochie kpakpando ahụ. Aha ya bụ Gabriel Veron.
Mgbe mkparịta ụka a gasịrị, Palmeiras egeghị ntị ọ bụla mana nke ahụ emeghị ka onyeisi oche Santa Cruz daa mbà. Mgbe ọnwa ole na ole gachara, João Nobre kpọkwara ọzọ ma sie ọnwụ. N'oge a, klọb na-ege ya ntị.
Mgbe a nabatara ya, João Paulo (isi nke Palmeiras ntorobịa) kwusiri ike na Gabriel Veron dị afọ 15 ga-anọ na Traininglọ Ọrụ Ọzụzụ Ndị Ọsọ maka ọnwa abụọ ma ọ bụ atọ iji hụ. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ gbagoteghị n'oge ahụ n'ihi na nwata ahụ dị ezigbo mma.
Naanị ụbọchị anọ (karịa ọnwa atọ), onye ndu ndị ntorobịa Palmeiras kpọrọ onye isi ala Santa Cruz na-asị;
Biko zitere anyị akwụkwọ Veron. WE nabata ya.
2019 FIFA U-17 World Cup - Akụkọ Ọganiihu:
Gabriel Veron wepụrụ ọhụụ ọhụụ nke ndụ ya, ọ kwụsịghị ịrị elu ọkwa football. Obere oge karịa ụbọchị iri anọ ka nke ahụ gasịrị, kpakpando na-arị elu (maka ọ ofụ nke ezinụlọ ya) kpọrọ oku nrọ ya.
Ndị ọchịchị bọọlụ Brazil kpọrọ Gabriel Veron ka ọ sonyere ndị otu na-erubeghị afọ 15 na nke mbụ. Ọ kwụsịghị ebe ahụ, kpakpando uto ahụ bịanyekwara aka na Palmeiras nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya.
Ugbua ọ dị na Brazil n'okpuru 17s, kpakpando na-arị elu gụnyere na ndepụta Guilherme Dalla Déa nke 21-player maka 2019 FIFA U-17 World Cup. Dị ka a tụrụ anya ya, Gabriel Veron abụghị naanị na ọ ghọrọ onye na-enweghị mgbagha asọmpi ahụ, o nyere ya ihe mgbaru ọsọ atọ mara mma dị ka egosipụtara na vidiyo dị n'okpuru.
N'ikpe ikpe site na arụmọrụ ya, ị ga-ekwenye na m Gabriel Veron kwesịrị ịdọ ya gburugburu. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ onye siri ike, onye nwere ọgụgụ isi na ọgụgụ isi. Ọ bụrụ na ị jụọ anyị, anyị nwere ike ịhụ onye ọzọ Ronaldo Luis Nazario de lima ma ọ bụ ụfọdụ ụdị Rivaldo n'ime ya.
N’asọmpi ahụ, nwa afọ Assu mere akụkọ ihe mere eme site n’inyere ya aka bulie iko a nke ugboro anọ ka mmeri Mexico meriri 2-1. Know maara?… Gabriel Veron hoputara onye ọkpụkpọ kacha mma nke U-17 World Cup. Nke a bụ kpakpando na-arị elu na-ejide onyinye Golden Ball.
Gabriel Veron nwetara ọkwa mba mgbe ọ dị obere.
Ulo Oru nke 2020:
Mgbe asọmpi FIFA, Veron malitere ọchịchọ nke imebi ihe ndekọ na ọkwa ọgbakọ. Nwa nwoke Assu ghọrọ onye ọkpụkpọ nke abụọ na-eto eto maka Palmeiras na onye ọkpụkpọ kachasị nta na akara egwuregwu Libertadores.
Dị ka a ga - asị na nsọpụrụ ndị ahụ ezughi, obi ike ya nyeere White-Green aka inweta nnukwu ugwu atọ na 2020. Ha gụnyere; Campeonato Paulista, Copa Libertadores na Copa do Brasil. Ihe na-adọrọ mmasị bụ, Gabriel nyeere klọb aka imezu nke a - niile n'otu oge.
You nwere ike iche? Amara nke Gabriel Veron nyeere klọb ya aka inweta mmeri ndị a niile - n'otu oge.
N'ikpeazụ na n'ikpeazụ, otu nwatakịrị nwoke dara ogbenye nke papa ya chọrọ ka ọ bụrụ Nwa Egwu achọpụtala nrọ nwata ya. Ka m na-ede Bio, Gabriel Veron nwere ike ịhapụ Palmeiras ikekwe n'oge na-adịghị anya. Okwesiri, n'oge na-adịghị anya, ịnwe atụmatụ nde mmadụ site na nnukwu ụlọ ọrụ na Europe.
N'ezie, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ọ bụ naanị oge tupu football football amata ọwụwa Brazil na-arị elu dị ka nnukwu uzommeputa maka egwuregwu ahụ. Ihe ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu banyere Gabriel Veron Biography, bụ akụkọ ihe mere eme ruo mgbe ebighị ebi.
Onye bụ nwa agbọghọ nwanyị Brazil ma ọ bụ Nwunye ka ọ bụrụ?
Si na Northeast Brazil pụta (Assu, Rio Grande do Norte) wee bụrụ ndị na-agba ọsọ nke ọma, anyị nwere ike ikwu nke a. Ndi umuaka ga enwe obi uto Veron.
Ee! Ihe mara mma nke Gabriel Veron tinyere ụdị egwuregwu ya ga-etinye ya na ndepụta nke ụmụ nwanyị. Karịsịa ndị ga - akpọ onwe ha ndị nwere ike ịbụ ndị enyi nwanyị, nne nke ụmụaka amụrụ amụ (mama mama) ma ọ bụ nwunye. Iji mezuo nke a, anyị na-ajụ… isnye bụ Gabriel Veron mkpakọrịta nwoke na nwaanyị?
Mgbe anyị nyochachara, ndị otu anyị chọpụtara na ọ ga-ekwe omume, na ezinụlọ ya gwara ya ka ọ nọrọ n'alụghị di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ na ọ nweghị ihe ọzọ.
N'ihi ọdịdị a na-agbagharaghị agbachapụ nke ịgba bọọlụ oge mbụ, ọ bụ ihe amamihe dị na Veron ka ọ dịkarịa ala lekwasị anya na ọrụ ya. O nwere ike ime ka mmekọrịta ya na ọha na eze mgbe ọ hapụrụ ụsọ mmiri Brazil na ụlọ ọrụ Europe.
N'akụkụ a nke Gabriel Veron's Biography, anyị ga - enyere gị aka ịmatakwu banyere ọbịbịa Brazil na - abịanụ - gbasara ụdị ya. Nke mbụ, ka anyị jụọ ajụjụ ị nwere ike ibu n’uche; Ọnye na-bụ Gabriel Veron n'èzí football?
Gabriel Veron Ndụ Nke Onwe.
Maka ndị mbido, ịdị umeala n'obi bụ ihe mbụ ị ga - ahụ mgbe ị hụrụ nwa Graciele Fonseca na Carlos Eduardo. Gabriel Veron bụ onye na-agbanye ụkwụ ya n'ala.
N'agbanyeghị nnukwu ego na-abanye n'akpa uwe ya, Gabriel ka na-eyiri ụzọ dị umeala n'obi. N'obodo ya (Assu), onye Brazil abụrụla arụsị ka ọ bụrụ talent. Otu ihe atụ bụ nwatakịrị nwoke aha ya bụ João Pedro (afọ 6).
You maara? Mother nne nwata nwoke a nyeere nwa ya nwoke aka ịme vidiyo ebe ọ kwuru na nnukwu nrọ ya bụ izute arụsị ya bụ Gabriel Veron.
N'ụzọ dị ịtụnanya, vidio ahụ ruru ndị na-agba ọsọ na ihe na-erughị otu izu, Gabriel Veron gara leta nwata ahụ na ezinụlọ ya - na-enye ya uwe T-shirt. N'ụbọchị ahụ, enwere mmetụta dị ukwuu n'ụlọ onye na-akwado ya.
Gabriel Veron zụtara onye agbata obi ya ụgbọ ala:
Maka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-agba ọsọ na-eto eto, mgbe ha meriri ihe (ma ọ bụ hụ ego), ha ga-amalite imefu ya na ezinụlọ ha. N'ọnọdụ ụfọdụ, zụrụ ihe ndị mara mma maka onwe ha. Otú ọ dị, nke a abụghị ihe gbasara Gabriel Veron.
Ndị na-agba ọsọ bọọlụ Brazil na-agbasa ego ya na ndị agbata obi ya na ndị enyi ezinụlọ ya. Karịsịa ndị kwere na ya na ya abụghị ihe ọ bụla. Veron nyeere nna nna ya aka site na idozi ụlọ ya wee buru nnukwu ụjọ - ịzụtara ya ụgbọ ala.
Nke a bụ vidiyo mmetụta uche ebe Gabriel Veron nyefere igodo ụgbọ ala nna nna ya.
Ezinụlọ ahụ kpọsara oge ịtụnanya na netwọkụ mmekọrịta. Ndị na-agba ọsọ bọọlụ gwara nna nna ya okwu ndị a mgbe ha na-eweta onyinye ahụ;
Nke a bụ maka gị. Maka ihe ọ bụla imere m, maka onye agha ị bụ na agha ị lụrụ maka mụ na ezinụlọ m.
Mgbe ọ natara onyinye ụgbọ ala ahụ, nna nna ya na-enweghị mmetụta ya kwuru;
Daalụ nke ukwuu, nwa m. Ka ị na-eto eto na ndụ gị.
Gabriel Veron Ndụ:
N'ebe a, anyị ga-ekpughere gị akụkụ nke ụzọ o si ebi ndụ ma na-emefu ego football ya. Anyị na-enyocha ụzọ ndụ Gabriel Veron site n'akụkụ abụọ. Nke mbụ bụ ụzọ ejiji ya dị mma nke abụọ bụ nke abụọ - nyocha banyere ụgbọ ala ọ na-anya.
Mgbe ị hapụrụ obodo (Assu) ịga biri n'obodo ukwu dị ka São Paulo, ụdị ndụ ọhụrụ nwere ike ịmetụta gị. Sensebọchị ndị a, ụdị ejiji Gabriel Veron agbanweela. Ugbu a, ọ na-eyi ugogbe anya Edgar Davids, yana ntutu ntutu siri ike, agbụ na uwe ndị mara mma.
Gabriel Veron mma uwe ejiji. Ọ na-eji ego ya achọ mma.
Gabriel Veron ụgbọ ala:
Kpamkpam na 19th nke Mee 2021, kpakpando Brazil kpughere ndị Fans ya - ihe dị ka nwa ọhụrụ ya. Gabriel Veron deere foto ya na otu enyi ya n'ihu ụgbọala Ford Explorer abụọ nwere ihe nkọwa ya;
Enwere m ike ime ihe niile site na Kraịst onye na-agba m ume ~ Ndị Filipaị 4:13
N'akụkụ a nke Bio ya, anyị ga-ekpughere gị otu onye Brazil na ezinụlọ ya. Gabriel bụ onye na-eji obi ụtọ echeta ndị ezinụlọ na ndị enyi nyerela aka na ọrụ ya. Anyị nwere ekele pụrụ iche maka ndị nne na nna ọ na-akpọ dịka isi ya.
Banyere Gabriel Veron nne:
Naanị lee ha anya n'okpuru, ị ga-eche na ha abụọ bụ enyi nwoke na enyi nwanyị. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, Gabriel Veron nweere onwe ya na nne ya. Ọ na-emeso ya dị ka nwunye ya, na-akpọrọ ya gaa n'ọdọ mmiri. Ihe a niile, n'ihi na o kwesịrị ịnụ ụtọ ihe ịga nke ọma ọ kpatara.
Hụ otu Gabriel Veron si emeso mama ya.
Site na ụbọchị mbụ, Graciele Fonseca Silva na-achọkarị ka ọ dị n'etiti ya na Gabriel. Eziokwu bụ, ọ bụ ụdị mmetụta uche, onye na-akwa ákwá nke ukwuu mgbe nwa ya nwoke hapụrụ Rio Grande do Norte gaa São Paulo.
Dị ka nne si kwuo - na nyochaa na Globo Esporte;
Ebere m ákwá nke ukwuu n'ihi na achọghị m ka m nọrọ nwa m nwoke nso, mana n'agbanyeghị nke ahụ, m kwadoro Gabriel nke ukwuu, n'ihi na ọ na-achọ nrọ.
Graciele Fonseca Silva nwere obi ụtọ ugbu a maka ihe ịga nke ọma nwa ya nwoke.
Banyere Gabriel Veron Nna:
Still ka bụ onye na-egwu egwu na onye ọbịa na obodo ya Assu, Carlos Eduardo de Souza ka nọ nso nwa ya n'agbanyeghị na ọ na-eleghara ọdịnala ochie nke ezinụlọ anya.
Obi dị m ụtọ, Nna Gabriel Veron ghọtara ugbu a ihe kpatara mkpebi nwa ya nwoke ji kwụsị ịbụ onye na-egwu egwu. N'ikwu okwu banyere nne na nna ya, na nyochaa, onye Brazil kwuru otu oge;
Enwere m ndụ m n'aka ha ma ha na-anọchite anya m ihe niile.
N'agbanyeghị ihe merenụ, etinye m ha abụọ (nne na nna) mbụ.
M ga-alụ ọgụ, nwụọ ma meere ha ihe niile. Iji hụ ihe ndị mụrụ m meere m, m na-ewere ya ka enyo na ndị dimkpa.
Nsonaazụ sitere na nyocha nwere nna Gabriel Veron na nwunye ya (Graciele) na-ekwu okwu mana ha anaghị ebikọ ọnụ.
N'oge na-adịbeghị anya, nne na nna ahụ gọnahụrụ nkwupụta sitere n'aka nwoke na nwanyị (aha ya bụ Roselita) onye si Brasilia. Ọ ghagha ụgha na nne na di ya, nna nke nwa ha nwoke bọọlụ.
Banyere Gabriel Veron Sisters:
Ọganihu ndị Brazil nwere abụọ n'ime ha ma ha emee ka ụwa ya zue. Dị ka ndabere nke ezinụlọ ya, nkwado ego na mmụọ nke Gabriel maka nwanne ya nwanyị enweghị njedebe. N'agbanyeghị usoro ọrụ ya siri ike, ọ na-ewepụta oge maka ha. N'ebe a, ọ na-enwe ebe igwu mmiri na ụmụnne nwanyị yiri ya na mama ya.
Gabriel Veron nwere ọdọ mmiri na ụmụnne ya nwanyị na nne ya.
Gabriel Veron nne na nna ochie:
Dị ka nne ya si kwuo (Graciele), otu n'ime mkpali mmụọ nke nwa ya nwoke nke nyeere ya aka ibili ka ọ bụrụ ọkachamara n'ịgba bọọlụ bụ Granddad ya. Gabriel dịrị ndụ ma mụta ọtụtụ ihe banyere ụkpụrụ ndụ n'aka ya.
N'ụzọ dị mwute, José Nazareno da Silva ahụtụbeghị nwa nwa ya ka ọ bụrụ ọkachamara n'ịgba ọsọ ka ọ nwụrụ na 2015. Dị ka nwunye ya si kwuo, Dona Graça (nne nne Gabriel Veron), di ya buru amụma banyere nwa nwa ya tupu ya anwụọ. N'okwu ya;
"Ọ ga - abụ onye a na - apụghị igbochi, ọ gaghịkwa ahapụ ịbụ onye ọkpụkpọ egwuregwu bọọlụ"
Gabriel Veron Nwanne:
Mgbe ị kpọtụrụ ndị ezigbo nwoke ndụmọdụ na ezinụlọ, Jackson Fonseca na Zeca pụtara ogologo. Ha bụ Gabriel Veron Uncles. N'ime ha, Uncle Jackson (nke dị n'okpuru ya na Veron) nwere mmetụta dị ukwuu na ndụ ya.
Zute Uncle nke Gabriel Veron - Jackson Fonseca.
N'oge a, ya na nna nna Veron kpọọrọ ya gaa egwuregwu ọ bụla ọ gbara mgbe ọ bụ nwata. N'ikwu okwu banyere ọrụ Uncle Jackson na ndụ ya, Veron chetara otu oge;
N'oge ahụ, ọ na-etinye m n'ubu ya ma na-agwakarị njakịrị iji dọpụ uche m, ka ike ghara ịgwụ m n'egwuregwu ahụ.
Deede Jackson na-enwe obi ụtọ mgbe nile. Enye ama ada mi ke mbre mbre.
Eziokwu Gabriel Veron:
N'ịchikọta akụkọ ndụ anyị, anyị ga-eji ngalaba mmechi a kpughee eziokwu ndị ọzọ gbasara nnukwu ọrụ na-abịa n'ihu na bọọlụ Brazil. N’etughi oge, ka anyi bido.
Eziokwu # 1 - Gabriel Veron Palmeiras Salary Breakdown and Comparison to the nkezi Brazil Citizen:
Gabriel Veron's Palmeiras na Real Brazil (BRL)
Kwa Afọ: 889,308 BRL
Ọnwa kwa: 74,109 BRL
Kwa Izu: 17,076 BRL
Kwa :bọchị: 2,439 BRL
Kwa elekere: 101 BRL
Nkeji ọ bụla: 1.6 BRL
Sekọnd ọ bụla: 0.03 BRL
Ebe ọ bụ na ị malitere ile Gabriel Veron'Bio, nke a bụ ihe ya na Palmeiras rụpụtara.
Ebe o si bia, onye na-arụ ọrụ na Brazil na-enweta ihe dịka 8,560 BRL kwa ọnwa. Ya mere, ọ ga - ewe afọ 8.6 maka onye Brazil ọ bụla iji nweta ụgwọ ọnwa ọ bụla nke Gabriel Veron na Palmeiras.
Eziokwu # 2 - Gabriel Veron Profaịlụ - Nnukwu Ike:
Onye Brazil bụ otu n'ime ụmụaka egwuregwu pere mpe nwere ọkwa kachasị elu. Ihe nke a pụtara, bụ na Gabriel Veron bụ ihe zoro ezo na ihe ijuanya achọpụtara. Ihe profaịlụ ya nke 2021 FIFA kwuru ihe niile - na ọ nwere ike bụrụ mba kachasị mma n'ọdịnihu.
Gabriel Veron Profaịlụ - FIFA.
Eziokwu # 3 - Gabriel Veron Religion:
Chọọchị Katọlik bụ ụka ụka kachasị nwee ọnụ ọgụgụ ndị Kraịst na Brazil, ebe ihe ruru nde mmadụ 123, (64.6% nke ndị bi na Brazil) bụ ndị Katọlik kwupụtara n'onwe ha. Nyocha nwere na nne na nna Gabriel Veron bụ ndị Katọlik na a mụrụ ya dịka otu.
N'oge ọ na-erughị otu afọ, mama ya (Graciele Fonseca Silva) kpọọrọ ya maka Baptism. A na-eji ọkụ na kandụl n'oge baptism Katọlik. Nke a bụ obere Gabriel na-anata sakramenti mbụ ya.
Okpukpe Gabriel Veron - kọwara.
Eziokwu # 4 - Ezi Omen:
Obi abụọ adịghị ya, ịdị adị nke Sebastian Veron bụ nnukwu ihe na-akpali Gabriel. Karịsịa, ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịmara na akara aka na-ejikọ ndị na-agba ụkwụ abụọ, ọbụlagodi na ị hụbeghị ibe ha. Ugbu a, ka kwado okwu a.
You maara? Date ụbọchị Juan Sebastian Verón kwuru nke ọma na football (May 2017) dabara na mbata Gabriel Veron na Palmeiras. Lee ezigbo omenaala bọọlụ!
Eziokwu # 5 - Gabriel Veron Net Worth (2021):
N'oge ị na-emepe Biography nke a, ọ nwere nanị afọ abụọ nke ahụmịhe ọkachamara. Onye ọrụ Gabriel Veron (Fabio Mello Sports) amalitelarị inyere ya aka ịme ezigbo ego na bọọlụ. Site na ụgwọ ọnwa ya ugbu a nke 889,308 BRL, anyị na-eme atụmatụ Gabriel Veron's 2021 net ruru ihe ruru Dollar 200,000.
Azịza nke akụkọ ndụ
Aha n'uju: Gabriel Veron Fonseca de Souza
aha otutu: Raio
Ụbọchị ọmụmụ: 3 nke Septemba 2002
Ebe amụrụ onye: Assu, Rio Grande do Norte
Age: 18 afọ na ọnwa 10.
Ndị nne na nna: Graciele Fonseca Silva (Nne) na Carlos Eduardo de Souza (Nna)
Ụmụnne: Sistersmụnne nwanyị abụọ, enweghị nwanne.
Ndị ikwu: Jackson Fonseca na Zeca (nwanne nna), Rafael (Cousin)
Education: Instituto Padre Ibiapina, Assu
Ihe akara Zodiac: Virgo
Ọnọdụ egwuregwu: -atụ
Onye nnọchi anya: Fabio Mello Egwuregwu
Obi abụọ adịghị ya, Gabriel Veron bụ ihe akaebe na iburu onye na-agba ama ama ama ama nwere ike ịchọrọ mmadụ ịdị ukwuu n'agbanyeghị agbanyeghị ike ezinụlọ sitere. Ọ si n'ụlọ na-agba bọlbụ wee mụọ ya na Assu, Rio Grande do Norte, otu n'ime ebe kachasị sie ike ịhụ ndị na-agba ọsọ na Brazil.
Ihe omuma nke Gabriel Veron na-eme ka anyi ghota na adighi ike anyi kachasi ike bu na anyi jigidesighi ihe anyi kwenyere na ya ike n’agbanyeghi nsogbu. Ọ bụrụ n’icheta, onye Brazil sitere na ezinụlọ nwere ogologo akụkọ gbasara Anụmanụ.
Dị ka nna ya na nne na nna ya ochie, a mara ya ikpe na mbụ ka ọ bụrụ onye na-egwu egwu. Veron nọgidere na-enwe nrọ ya ịghọ ndị na-agba ọsọ n'agbanyeghị na ọ ghaghị imegide ịgbaso nzọụkwụ ọrụ nna ya. Mmụọ ọgụ dị egwu, ịrụsi ọrụ ike, mkpebi siri ike ma mee ka ọ nwee ihe ịga nke ọma taa.
Daalụ maka ịgụ nnukwu edemede a na Gabriel Veron Biography. Na Lifebogger, anyị na-agba mbọ maka ịkwụwa aka ọtọ na izi ezi na ọrụ anyị na-adị kwa ụbọchị n'ịbuga akụkọ banyere Ndị ọgba bọọlụ Brazil.
Jiri nwayọ rute anyị ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya na ncheta anyị na Assu. Ma ọ bụghị ya, Jiri obiọma mee ka anyị mara ihe ị chere banyere Gabriel Veron na ngalaba nkọwa.